သရေခေတ္တရာ အမွေအနှစ် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှ ကြီးမှုး ကျင်းပသော (ပျူအမွေအနှစ်) ဓါတ်ပုံ ပြပွဲကျင်းပမည် | Pyay City
ပြည်မြို့ အ ထ က ၅ ကျောင်းနှင့် အဝေးပြေးကားဝင်း လမ်းဆုံတွင် စိမ်း ၊ဝါ ၊နီ အချက်ပြ… »
« ရွှေတောင်တွင် ဓာတ်ပုံနှင့် စာအုပ်ပြပွဲ ကျင်းပ
1. ပျူအမွေအနှစ် ခေါင်စဉ်ဖြင့် လိုက်ဖက်သော ဓါတ်ပုံများကိုသာ လက်ခံပြသ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
3. ဓါတ်ပုံ အရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
6. ဓါတ်ပုံပေးပို့ပါသော ဝါသနာရှင်များသည် ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးသူအမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပတ်၊ လိုင်စင် ဓါတ်ပုံ ၁ပုံ၊ ပေးပို့ထားသော ဓါတ်ပုံ ၁ပုံ စီ၏ File name ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူး ထားသောတည်နေရာနှင့် camera setting အချက်အလက်များကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးကြောင်း ခံဝန်ချက်နှင့် အတူ လက်မှတ်ရေးထိုးကာ A4 စါရွက်ဖြင့် ဓါတ်ပုံပေးပို့ချိန်တွင်တပါးတည်း ပေးအပ်ရပါမည်။
Sriksetra Heritage Trust – Thayakhittaya Pyay